Waa maxay walxaha ku jira Barnaamijka Tayada Baradhada Baradhada ee Maraykanka? - Joornaalka "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga News Wararka adduunka
Waa maxay walxaha ku jira Barnaamijka Tayada Baradhada Baradhada ee Maraykanka?
в Wararka adduunka, News, Taranka iyo abuur abuurka, Isbeddellada / Isbeddellada
Sideed ku ogaan kartaa in baradho abuurka abuurku aanu cudur lahayn?
Warshadaha abuur baradhada Ameerika way adagtahay in la dhex maro. Gobol kasta ama gobol kastaa wuxuu leeyahay xeerar u gaar ah oo shahaado abuurka ah, kaas oo abuura iswaafaqla'aan.
"Barnaamijyada baradhada shinnidu way kala duwan yihiin iyadoo ku xidhan suuqyada ay u adeegaan. Haddii gobol leeyahay wax soo saar ganacsi oo la taaban karo, [haddiisa] ugu weyn waxa laga yaabaa inay noqoto in abuur beerahooda ganacsi la siiyo,” ayay tidhi Nina Zidak, Jaamacadda Gobolka Montana, Associate Research Professor, shahaado baradhada abuurka.
Ma jiro warshad ganacsi oo baradho ah oo ku taal Montana, markaa diiradda ayaa saaran abuurka, ayuu yidhi Zidak.
Hadafka barnaamijka shahaadada baradhada shinnidu maaha in la bixiyo abuur aan cudur lahayn, laakiin waa in la hubiyo in iniinuhu buuxiyaan heerarka tayada la aqbalay, ayay tidhi Kasia Duellman, borofisar ku-xigeenka iyo khabiirka baradhada abuurka ee Jaamacadda Idaho.
"Barnaamijyada shahaado-siinta abuurku waxay bixiyaan caddayn madax-bannaan, oo dhinac saddexaad ah oo ah tayada baradhada shinnida," ayuu yidhi Alan Vestra oo ka tirsan Ururka Horumarinta Dalagga Idaho, Maamulaha Gobolka Koonfur-bari. Wakaaladaha shahaado bixinta ayaa go'aamiya waxa go'aamiya tayada baradhada. Tani macnaheedu maaha in hay'adda caddayntu aysan sheegan karin maqnaanshaha cudurrada qaarkood.
"Barnaamijyo badan, heerarku waxay muujinayaan inaan loo dulqaadan karin cudurrada qaarkood iyo dulqaadka kuwa kale," Duellman ayaa yidhi. "Cudurada qaarkood looma ogola oo kaliya iniinaha taranka sare ama dhammaan jiilalka loogu talagalay shahaado."
Tani waxay ka dhigan tahay in abuur kasta oo cudur la ogaaday aan la cadeeyn doonin, ayuu yiri Duellman. Xaaladaha kale, si kastaba ha ahaatee, dulqaad ayaa la dejin karaa. "Haddii dulqaadka la dhaafo, tayada abuurka iniinaha ayaa la dhimay ama waa la diiday," ayay tiri.
Shahaadadu waxay sidoo kale ku kala duwanaan kartaa jiil. Iniinaha taranka sare (asaasiga ah) waxaa badanaa laga iibiyaa kuwa kale ee abuura kuwaaso faafiya ilaa hal sano ka hor inta aysan faa'iido u yeelan beeralayda ganacsiga. Waxay iibsadaan jiilalka dambe ee miraha baradhada, badiyaa jiilalka 3 iyo ka kor. Heerarka ayaa laga yaabaa inay sare u kacaan jiilkii hore, sababtoo ah wixii dhib ah ee ku yimaada abuurkani waxay sii badin doonaan oo kaliya marka ay koraan kuwa abuura abuurka iyo ka dibna beeralayda ganacsiga.
Jaamacadda Montana Barnaamijka Shahaadada waxay leedahay sumcad aan la soo koobi karin. Tan waxa u sabab ah xaqiiqda ah in beeralayda gobolkan ay xoogga saarayaan wax soo saarka abuurka. "Waxaan raadineynaa inaan soo saarno miraha dib loogu cadeeynayo wax soo saarka baradhada shinni ee gobolada kale," ayuu yiri Zidak.
Sababtoo ah barnaamijyada shahaadodu aad bay u kala duwan yihiin, waxaanu maqalnay fikrado badan oo ku saabsan waxa barnaamij kastaa ku jiro.
Wakiilada Jaamacadda Montana waxay tijaabiyaan dhammaan dhirta aasaasiga ah iyo jiilka 1aad ee fayraska mosaic (PVY). Waxay sidoo kale sameeyaan tijaabinta goosashada ka dib, iyagoo muunado ka soo diraya dhammaan beeraha beeralayda ilaa Hawaii si ay u koraan inta lagu jiro xilliga. Kooxdu waxay baadhaan oo ay caleen ka soo qaadaan geed kasta ka dibna waxay dib ugu celiyaan shaybaadhka. Caleemaha waxaa lagu tijaabiyaa saddex fayras: PVY, fayraska baradhada X (PVX) iyo fayraska baradhada A (PVA).
Barnaamijka Shahaadaynta Baradhada ee Wisconsin ma hubiso dalagga laba jeer xagaaga iyo goosashada ka dib, laakiin sidoo kale kaydinta iyo meelaha rarida. Sida laga soo xigtay Russell Groves, borofisar iyo khabiir ku takhasusay fidinta ee Jaamacadda Wisconsin isla markaana ah agaasimaha ku meel gaadhka ah ee Barnaamijka Shahaadaynta Baradhada ee Wisconsin, sida hagaajinta si joogto ah loo sameeyo, waxaa muhiim ah in la cusboonaysiiyo borotokoolka baaritaanka ogaanshaha ee ogaanshaha cudur-sidaha iyo hababka lagu xaddidayo isku dhafka cultivar.
Dukumeenti sidoo kale waa fure. Ma aha wax aan caadi ahayn in iniinku ka gudbaan khadadka gobolka halka ay u baahan yihiin inay u qalmaan barnaamij kale oo shahaado ah. "Arrinta kale ee barnaamijka shahaado-siinta xooggani waa ka-saarista dhirta cudurka qaba," ayuu yiri Brian A. Charlton, ku-simaha agaasimaha Jaamacadda Gobolka Oregon ee Klamath Basin Baradhada.
Si kastaba ha ahaatee, shahaado kaligeed ma beddeli karto xidhiidhka adag ee ka dhexeeya alaab-qeybiyeyaasha abuurka iyo beeralayda. "Fikradayda, kalsoonida iyo ka-qaybgalku waxay ka muhiimsan yihiin tijaabinta," ayuu yidhi Reagan Grabner, madaxweyne ku xigeenka CSS Farms, soo saaraha abuurka ee Gobolka Washington. "Abuuraha iniinaha iyo beeraleyda ganacsigu waa inay yeeshaan xidhiidh dhow oo ay ku heshiiyaan waxa ay ka dhigan tahay in la keeno badeecad tayo sare leh."
Akhri maqaalka asalka ah
Tags: baradhada abuurwaxsoosaarka abuurka baradhadaUnited States
Beeridda khudaarta iyo baradhada ayaa si firfircoon looga fuliyaa gobolka Kaliningrad
Dhulka Altai, beeralaydu waxay kordhiyaan soosaarka baradhada